Art is My Life: မြွေနဲ့ဖားနဲ့ဝေးတဲ့မြေ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:05 AM
ဖားက မြွေကိုမြိုတာ ခဏခဏ မဟုတ်ပေမယ့် မြင်ဘူးပါတယ်။ သူအစာ သူစားတာမို့သဘာဝလို့ပြောရမှာပါ။ စိုးဇေယျ သူငယ်ချင်း ကိစ္စကလည်း သဘာဝ လို့ဘဲပြောရမလိုလို :P
ကိုယ့်ရှေ့ မြင်ရင်တော့ ကယ်မိမယ်ထင်တယ်
မြွေက ဖားကိုမြိုတာမျိုး ငယ်ငယ်ကတစ်ခါပဲ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခြံထဲမှာပဲကြုံခဲ့တာပါ။ တွေ့ တွေ့ ခြင်း
မှာအရမ်းကိုလန့် သွားပြီး ဒုတ်ရှည်ရှည်တစ်ချောင်း
အမြန်ပြေးကောက် တစ်ရှုးရှုးနဲ့ မြွေကို ခြောက်ခဲ့ဖူး
ပါတယ်။ သဘာဝတရားအရ ဆိုပေမဲ့ ကိုယ်တွေကြုံ
လာသူတိုင်း လက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်မှာ မဟုတ်
လောက်ဘူးလေ။ အနည်းဆုံးတော့ အားနွဲ့ သူဖက်က
ကူမိမလားပဲ။ ဒါနဲ့ ...အဓိက ပြောချင်တာကကိုဇေယျ
ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ လေးအကြောင်းပါ။ အရင်တွေးကြည့်
ရမှာက သူတို့ က မွေနဲ့ ဖား မဟုတ်ဘူးလေ။
လူတွေ....အသိညာဏ် ရှိတဲ့လူတွေ။ လုပ်သင့်တာနဲ့ 
မလုပ်သင့်တာကို ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့လူတွေလေ။ အဲဒါကို
မမေ့နဲ့ ။ ဘယ်ဘက်ကိုမှ ပါစရာမလိုဘူးလေ။ ပိုရှင်းချင်တယ်ဆိုရင် နှစ်ဦးဆုံတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်စိတ်မှာ သူတို့ ကိစ္စကို ဘယ်လိုသဘောထား
တယ်ဆိုတာသာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ တိတိကျကျ ပြော
ထားလိုက်။ သူတို့ ကလဲ သူငယ်ချင်းတွေကို Blame
လုပ်စရာ Excuse လောက်ပဲလုပ်မှာပါ။ သူတို့အချင်းချင်းမရှင်းနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့။ နောက်တစ်ခုက
လူတွေရဲ့ Personality ကို ညီမတို့ အတင်း
လိုက်ပြောင်းယူလို့ မရဘူးလေ။ အလုပ်ပေးသင့်ဆုံးကို အကောင်းဆုံး လုပ်ပေးရင်းပဲ
ရင်ထဲခံစားလာရတဲ့အတိုင်း ment လိုက်ခြင်းမျှသာ။
ပထမဦးဆုံးသော အရှည်ဆုံး comment for me..:)
အကောင်းဆုံး သို. အဆိုးဆုံး အဖြေ တခုခု၇လာမှာပေါ.
စာ၇ိတ္တမကောင်း၇င်တော. ဆက်တွဲနေလို. က ကိုယ်ပါလူမိုက်အားပေးဖြစ်တော.မှာပေါ.